Ihe kpatara Vidio Ego Ji Eme Ahịa | Martech Zone
Ihe kpatara Vidio Ego Ji Eme Ahịa
Fraịde, Ọktọba 18, 2013 Wednesday, October 16, 2013 Douglas Karr
Ekwenyere m na a ga - enwe ụbọchị nke mkpokọta weebụsaịtị ga - enwe vidiyo jikọtara nke ọma na ibe ọ bụla yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ post ọ bụla edepụtara. Ọnụ ndekọ, mbipụta na ikesa ọdịnaya vidio agbadatala nke ukwuu, na-eme ka ọ dị ọnụ ala n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa ọ bụla. Nke ahụ kwuru, ị ka chọrọ ịmasị ndị ọbịa gị ma zere ihe na-adịghị mma, na-agwakọta, ndekọ ma ọ bụ mmepụta.
Vidiyo nwere ikike ịbụ ngwá ọrụ dị ike maka ebumnuche ahịa B2B n'ihi ikike ya ịkụziri, wulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ndị otu gị, ngwaahịa na ọrụ. Ebe ọ bụ na ịmepụta ụzọ maka vidiyo nwere ike ịrụ ọrụ iji bulie ahịa ahịa gị.
Onyinyechukwu bụ Online Video Marketing Services na New York City & New Jersey na-enye ụfọdụ isi ọnụ ọgụgụ na mmetụta nke video na gị B2B ahịa atụmatụ.
Tags: ahịa b2bvidiyo na-ere ahịaahịa vidiyovideo ahịa ọnụ ọgụgụ
Ọkt 20, 2013 na 7:28 PM
Ndewo Douglas. Nnukwu ihe omuma! Otu ụlọ ọrụ na-eme nnukwu mkpọsa vidiyo B2B bụ Cisco. Ha na-ebipụta ọtụtụ ọdịnaya, gụnyere Q & As, ngwaahịa na ngosipụta nke na-arụ ọrụ dị egwu nke itinye na ịkụziri ndị na-ege ha ntị ọtụtụ okwu.